06:02:48 am 25-May-2022
अण्डा खानुको फाइदाः ४० वर्ष पुगेपछि दैनिक एउटा अण्डा खानुहोस्, स्वास्थ्यलाई मिल्नेछ यी ७ फाइदा
अण्डा पोषण (egg nutrition)
१.हड्डी बलियो हुनेछ,
बढ्दो उमेरसँगै हड्डी कमजोर हुनु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा दैनिक एउटा अण्डा खानु फाइदाजनक हुन्छ । अण्डामा क्याल्सियम र भिटामिन डी पाइन्छ, जसले हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ। अण्डा हड्डीको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ ।
२. जोर्नी दुखाइबाट छुटकारा मिल्छ,
उमेर बढ्दै जाँदा शरीर कमजोर हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा जोर्नी दुख्नु सामान्य समस्या हो । तर हरेक दिन एउटा अण्डा खाँदा जोर्नी दुख्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ । अण्डामा पाइने भिटामिनले हड्डी र जोर्नी दुखाइबाट राहत दिन्छ। यसले शरीरमा हुने भिटामिनको कमीलाई पनि हटाउँछ । अण्डा भिटामिन बी- १२ को राम्रो स्रोत हो, जसले दुखाइमा आराम दिन्छ।
उमेर पुगेपछि मेटाबोलिज्म सुस्त हुन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै स्वास्थ्य समस्याले सताउन थाल्छ । दैनिक एउटा अण्डा खाँदा मेटाबोलिजममा सुधार हुन्छ, रोगबाट टाढा रहन मदत पुग्दछ ।
४. आँखाको लागि लाभदायक
अण्डा भिटामिन र मिनरल्सको राम्रो स्रोत हो। आँखालाई स्वस्थ राख्नका लागि पोषक तत्व पनि आवश्यक हुन्छ । साथै, अण्डामा लुटेन जस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसले रेटिनालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। बुढेसकालमा दैनिक एउटा अण्डा खाँदा आँखाको ज्योति पनि बढ्छ । अण्डाले आँखाको समस्याबाट बचाउँछ ।
५ .एनीमियामा लाभदायक
एनिमिया भनेको शरीरमा रगतको कमी हुनु हो। बढ्दो उमेरमा अधिकांश महिलालाई रक्तअल्पताको समस्याले सताउने गरेको छ । यसबाट बच्नको लागि, तिनीहरूले आफ्नो आहारमा अण्डा समावेश गर्नुपर्छ। अण्डामा आइरन हुन्छ, जसले रगत आपूर्ति गर्छ । रक्तअल्पताको समस्या भएमा अण्डा खाने सल्लाह पनि दिइन्छ । यदि तपाईको शरीरमा रगतको कमी छ भने दिनमा एउटा अण्डा अवश्य खानुहोस् ।
६ .मांसपेशिहरु बलियो हुन्छ
अण्डा प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। प्रोटिनले मांसपेशी बनाउँछ। बढ्दो उमेरसँगै मांसपेशी कमजोर हुन जान्छ, त्यसैले दैनिक एउटा अण्डा खानुपर्छ । यसले मांसपेशी बलियो बनाउँछ।
७.मुटुको लागि लाभदायक
बढ्दो उमेरसँगै मुटुसँग सम्बन्धित समस्या पनि हुन थाल्छ । मुटुलाई सधैं स्वस्थ राख्न ४० वर्ष पुगेपछि हरेक दिन एउटा अण्डा खानुहोस् । अण्डाले मुटु रोगको जोखिम कम गर्छ ।